Panguva iyo masangano eEurope ari kutsvaga hutsva hwezvematongerwo enyika, apo kugadzwa kwevatungamiri vemasangano makuru eEurope kwatora nzvimbo yepakati kwemavhiki akati wandei, tinoshamisika here nezve izvo zvatinonyatsoziva nezvemasangano aya?
Muhupenyu hwedu hwehunyanzvi sehupenyu hwedu pachedu, isu tiri kuwedzera kutarisana neinonzi "European" mitemo.
Iyi mitemo inotsanangurwa uye inogamuchirwa sei? Ko masangano eEurope anosarudza sei basa iri?
Iyi MOOC ine chinangwa chekujekesa kuti masangano eEurope chii, mazvakerwo aakaitwa, mashandiro avanoita, hukama hwavanahwo nemumwe nemumwe uye neimwe yeNzvimbo dzeEuropean Union, nzira dzekuita sarudzo. Asi zvakare nzira iyo mugari wega wega uye mutambi anogona kupesvedzera, zvakananga kana kuburikidza nevamiriri vavo (MEPs, hurumende, vanoita zvemagariro), zviri mukati mesarudzo dzeEurope, pamwe nemishonga inogona kuvapo.
Sezvatichaona, masangano eEurope haasi kure, mabhii kana opaque semufananidzo unowanzo kuratidzwa. Vanoshanda pamwero wavo kune zvido zvinodarika hurongwa hwenyika.
European masangano January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Kutaurisa kune vese: mazwi evatauri, vanokakama uye varapi vekutaura
pashurePublic water policy mumibvunzo mishanu
zvinoteveraHuwori, rusarura, utsotsi… zvingadzivirirwe sei muhutungamiri hwenzvimbo?
Ruzivo nekudzivirira kushanya kwekurapa
Psychologist uye murapi wekutaura: EBP pabasa remurwere